I-SP-L07 350ml ye-Bluetooth Somlomo woLawulo lwe-Smart WIFI Arhente yeTyhefu, i-China SP-L07 350ml ye-Bluetooth Somlomo woLawulo lweSmart ye-Smart ye-Smart Abavelisi be-Arhente, abaXhasi, abaFektri -Sunpai Industries Limited
Inani Model: I-SP-L07
Isixa esincinci soMyalelo: Izixhobo ze-100
Iinkcukacha zoPakethe: Iziqwenga / iCarton
Ixesha lokuzisa: Iintsuku ezingama-20-45 zixhomekeka kubungakanani
Immimiselo yokuhlawula: 50% idipozithi, 50% eseleyo phambi kokuba unikezelo
I-350ml yeSithethi seBluetooth yoLawulo lweScreen seWIFI Arhente
Yenza ubomi obuqholiweyo nobonwabisayo
Ulawulo lwe-App: lawula wonke umsebenzi we-diffuser ngefowuni encinci ye-APP "Hydrone". Emva komyalelo othunyelwe ngempumelelo, i-diffuser iya kusebenza ngaphandle kwe-APP yefowuni. Akukho sidingo sokuhamba esiya kwisixhobo ukuze uhlengahlengise umsebenzi kodwa ngoku unokulawula lo msasazi ngeapp kwifowuni yakho!
2.Bluetooth Somlomo Player Player: Inokudibanisa isixhobo seBluetooth ezinje ngee-smartphones, iitafile kunye neekhompyuter zokuyalela umculo opholileyo. Yintoni engaphezulu kwesixhobo sokuhambisa ioyile kunye nesicocisi, ngesi sixhobo, ikwakhona nesidlali somculo / isithethi onokonwabela ukuphuma kwaso kodwa sikudlale umculo owuthandayo osuka kwisixhobo.
Ukuchongwa kwe-3.Aromatherapy kunye ne-Humification: Isisasazi seoyile esifanelekileyo esiqulethe ukuphuma kweelitha ezingama-0.035 ngosuku. Yenza indawo enevumba elimnandi nayo ngelixa usemsebenzini okanye ngexesha lakho lokuzonwabisa ukukunceda uphumle.
I-4Safety: Uyilo olwenziweyo lomsebenzi oluzenzekelayo, olusebenzayo luya kuyeka ukusebenza ngokuzenzekelayo xa amanzi ephelelwa, okanye ixesha liphelile.
5.Ukukhanya kobusuku bobusuku: Inezibane ze-LED ezimibalabala. Ukukhanya kunokujikeleza ngemibala esi-7. Okanye, inokuseta ngombala omnye.
6.Ixesha: Ngeqhosha elithi "MIST", unokuseta imodeli yesi-5 yeemitha ezingama-30, ezingama-60, ezingama-120, eziyi-180 kunye neziqhubekayo. Ngexesha le-7-15 iiyure.
imveliso DC24V / 0.65A
imathiriyeli I-ABS + PC + PP
ukukhanya Izibane ezi-7 ezimibalabala
iiyure 30/60/120 / 180min / ON
Ubungakanani beyunithi Φ14.3 * 17cm
Unit ubunzima 660g
Ubungakanani bebhokisi yemibala 15 * 15 * 17.9cm
ipakethe Iziqwenga ezili-18 / ibhokisi
Ubungakanani beCarton 47 * 47 * 38cm
NW / ibhokisi 12 Kum
GW / ibhokisi 13 Kum